အရေးပေါ် သတင်းကြေငြာချက် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Creative Writing » အရေးပေါ် သတင်းကြေငြာချက်
Posted by alinsett on Aug 1, 2013 in Creative Writing, Myanma News, News | 24 comments
မဖွယ်မရာသတင်း အလင်းဆက် ပြောာချင်တဲ့စကား
ကျပ် ၁၅၀၀ တန် SIM card များ မဲဖောက် ရောင်းချပေးနေပေမယ့်
ကျပ် တစ်သိန်းကျော်အထိ ပေါက်ဈေး ရှိနေပြီး ရောင်းချ ဝယ်ယူမှုတွေ ရှိနေတယ်လို့ သတင်းရပါတယ်။
ဝယ်လိုသူများနေပြီး ရောင်းချပေးတဲ့အရေအတွက်က နည်းနေတော့ အခုလို ဈေးတွေကြီးကုန်တာပေါ့ ။
၁၅၀၀ တန်ကို တစ်သိန်းကျော်ပေး ဝယ်နေရတယ်ဆိုကတည်းက ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှု မမှန်ကန်မှုက အရမ်း ဆိုးရွားနေတာပဲလေ . .
ပေး ဝယ်နေရသော ဖုန်းလိုအပ်သူများက ပြောကြားနေပါသည် ။
လက်ရှိ အချိန်ထိတော့ ဈေးနှုန်းမတည်ငြိမ်မှု / မမှန်ကန် မှုတို့ကို တာဝန်ရှိသူများ ဘက်ကလည်း တာဝန် မရှိသလိုလို ဖြင့်
တာဝန်ယူ ဖြေရှင်းပေးခြင်း မရှိသေးပါ ။
တမင်တကာများ လုပ်စားခွင့် ပေးထားသလား မသိ ဟု
မကျေမနပ် ပြောဆို ဝေဖန်ပြောဆိုမှုများလည်း ရှိနေပါသည်။
SIM card များကို ရပ်ကွက် မြို့နယ်များအတွင်း မဲဖောက် ရောင်းချပေးရာ
မဲပေါက်သူ ဦးရေလည်း အလွန်တရာ နည်းပါကြောင်း သိရသည်။
လိုချင်သူလည်း အင်မတန်များနေပါသဖြင့် ပြင်ပ ရောင်းချမှုများ ၏ဈေးကွက်အတွင်းတွင် . . ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှု / မမှန်ကန် မှုများမှာ ကြီးထွားလျက် ရှိကြောင်း သတင်းရ ရှိပါသည်။
ဂဇက်ရွာ သူကြီး ဦးခိုင် ၏ စကားအတိုင်း သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဘားမန်း ဟု ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် ကြွေးကြော် ရမလို ဖြစ်နေပါသည်။
အကြောင်းမှာ . . ,
သခင်မျိုး ဆိုသည်မှာ ကြွယ်ဝ ချမ်းသာ ပြီး သြဇာ ရှိသော အမျိုးဟု သတ်မှတ်လျှင် ရသောကြောင့် . . . .
ယခု ၁၅၀၀ တန်ကို တစ်သိန်းကျော် ပေးပြီး ဝယ်ယူ အသုံးပြု နိုင်သူများမှာ သခင်မျိုး သာ ဖြစ်ပါကြောင်းးးး
ကျွန်မျိုး ဆိုလျှင် ၁၅၀၀ တန်ကို တစ်သိန်းကျော် ပေး၍မဝယ်ယူနိုင်ပါကြောင်းးးးး
သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါသည် ။
“ငါ ဆင်းကဒ်ကို ၁၅၀၀ နဲ့ ရောင်းပေးမယ်လို့ မိန့်ခွန်းထဲမှာ ပြောထဲ့လိုက်ပြီးပြီ၊ မင်းတို့ ဖြစ်အောင်လုပ်´´
“အဘ ကလည်း အပြောစောတာ အဲလိုတော့ ချက်ချင်းကြီး ပေါပေါလောလော ရောင်းလို့ မဖြစ်သေးဘူး အဘ´´
“အရမ်း ပေါပေါလောလောထုတ်ရောင်းရင် အဘနဲ့မိတ်ဆွေတွေ ရှယ်ယာပါထားတဲ့ ဖုန်းဆိုင်တွေ စီပွားပျက် ကုန်မှာပေါ့ အဘရယ်´´
“မင်းနဲ့ ငါ့တပည့်လုပ်နေပြီး အ ပါ့ကွာ ပြောစကားလည်းတည်အောင် ၁၅၀၀ နဲ့ အမြန်ရောင်း ဖုန်းဆိုင်တွေ လည်းလုပ်စားကွက်ဖြစ်အောင် ကြံဖန်လိုက်ပေါ့ကွာ သဘောပေါက်ပြီလား´´
သို့ပါသဖြင့် ဆင်းကဒ်အား ယခုကဲ့သို့သော စနစ်ဖန်တီးကာ ရောင်းချခဲ့လေသည်။ သတင်းစာ ခေါင်းကြီးပိုင်းမှာတော့ ဆင်းကဒ်တွေ ၁၅၀၀ ကျပ်ဖြင့် အစိုးရမှာ ရောင်းချပေးဟု စားလုံးမဲ အကြီးကြီးနဲ့ ရေးလေသည်။
ဟုတ်တယ် လေးခ ရေ
၁၅၀၀ ထဲနဲ့ ဝယ်လို့ ရမယ် ပေါ့
တကယ်တမ်း ၁၅၀၀ နဲ့ မဲပေါက်လို့ရတဲ့သူ
အစိုးရအလုပ်ထဲ.. တိုင်းပြည်ဘဏ္ဍာငွေကို.. ထိမ်းသိမ်း/သုံးစွဲတတ်နိုင်မှုလည်းပါတယ်…။
အဓိကကတော့.. Checks and Balances အရ.. ကွန်ဂရက်(လွှတ်တော်)က..ငွေထုတ်ပေးရပြီး.. သမ္မတရုံးက.. ငွေတောင်းရ..သုံးရတာပါ..။
၁၅၀၀ကျပ်တန်ဆင်းကဒ်လူတွေသုံးနိုင်ဖို့က..ဘက်ဂျက် ငွေခွဲတန်းချကြေးဆို.. နောက်ဆုံးမှာရှိရမယ်လို့.. ယူဆမိတယ်..
ကျုပ်သာအစိုးရဆိုရင်.. လူထုကို ၁၅၀၀ကျပ်တန်ဆင်းကဒ်အစား… လျှပ်စစ်စက်ရုံအကြီးကြီးတွေဆောက်ပေး… ရွာအထိလျှပ်စစ်မီးရအောင်(သာ)လုပ်ပေးတယ်..
ခံလိုက်ကြဦးပေါ့… Burman များ…..
၁၅၀၀ နဲ့ပေးမယ်လို့ စပြောကတည်းကိုကအယုံကြည်မရှိတာပါ။ သူကြီးကို သမတ တင်ချင်ပါတယ်။ဟီးးးး။ ကျမလည်း ကျေးလက်ဒေသတွေကို လျှပ်စ်စစ်မီးရစေချင်တယ်။ လမ်းပမ်းဆက်သွယ်ရေးချောမွေ့စေချင်တယ်။ အဲ့လာဆို ခရီးသွား လုပ်ငန်းကပိုပြီး ဝင်ငွေရ ရမှာ။ ပြီးတော. မြန်မာလူမျိုးတွေ ဆင်းရဲ တယ်။သနားစရာကောင်းတယ်ဆို တဲ့ အမြင်အစား သန့်ရှင်းသပ်ရပ်ပြီး စည်းကမ်း တကျ တိုးတတ်အောင်ကြိုးစားနေတဲ့ နိုင်ငံတစ်ခုအနေနဲ့မြင်သွားစေချင်ပါတယ်။
အန်တီ လီ ပြော သလိုပါပဲ
အဓိက က အိုက်ဒါ အိုက်ဒါ
အော် .. လောဘ .. လောဘ ..
အော် … ဝိသမ လောဘ .. ဝိသမ လောဘ ….
၁၅၀၀ နဲ့ ဝယ်ထားတဲ့ ဖိနပ်စုတ်လေးကို တစ်သိန်းလောက်နဲ့ ပြန်ရောင်းအုံးမှ …
နီ့ ဖိနပ်ကို.. လိုချင်သူများမှ ရမှာပေါ့ဟ ။
ပြီးတော့…နီ က… မိုက်ကယ် ဂျက်ဆင်လည်း.မဟုတ်…
၁၅၀၀တန်ဆင်းမ်ကဒ်ဆိုတာ မသိရင် ဆင်းမ်ကဒ်ကို နံမယ်ပေးထားသလိုဘာဘဲအေ။
ဒဂယ်ဝယ်ချင်ရင် ဘဒူ့အဖေခေါ်ရမှန်းမသိတဲ့ ဘွ။ ဖုန်းဆိုင်ကလူ ပြောလိုက်မဲ့ဈေးနှုန်းကို ရင်တထိတ်ထိတ်နဲ့စောင့်နေရတာ။ ဆိုးလွန်းပါဒယ်။ :chee:
1500 တန် ဆင်းကဒ်ရောင်းတယ်ဆိုတဲ့ .. ဖုန်းအရောင်းဆိုင်မှာ. ၀င်မေးကြည့်တာ..
1500 တန် GSM ကဒ် တစ်ကဒ်ကု်ိ…
CDMA 800 ကတော့…
တစ်ကဒ်ကို… 85000 တဲ့ လေ..။
1500 တန် မဲဖောက်ရောင်းပေးတဲ့ .. ကဒ်များ..
၁၅၀၀ တန်ဆင်းကဒ်ဆိုတဲ့ဟာ ပွဲဝင်စားလိုက်တာ တစ်ကဒ်ကို ၅၀၀၀
နှုန်းပွဲခ ၂ ခါရလို့ mec ဆင်းကဒ်အား မောင်မိုဘိုင်းမှ ၁၀၀၀၀ ဖိုးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းးးးး
ကျေးဇူး မတင် နိုင်သေးဘူး
ခုထိ မဲ မပေါက်သေးလို့ 
တစ် သိန်းကျော် မို့ 
သခင်မျိုးဟေ့ ဒို့ ဘားမန်း
၁၅၀၀နဲ့ ရောင်းနေတာ လအတန်ချီကြာပီ.. ခုထိ မှောင်ခိုဈေး ကောင်းနေဆဲဆိုဒေါ့ တခုခု လွဲနေပါပြီ။.. စစ်တပ်ဦးပိုင်ကို ဆင်းမ်ကတ် ရောင်းချဖြန့်ချီခွင့် တဦးတည်း ပေးထားကထဲက စလွဲနေဒါ… ကဲ… ဆိုဂျဦးလေ.. သမဒဂျီး ဘောသိပ်ကောင်းဒါပဲလို့… စားဂျကွာ သမဒဂွေးသီး.. နင်တို့ အဲဒါပဲ တန်ဒယ်…
ဖုန်းကဒ်မဲဖေါက်ပေးပိုင်ခွင့်ရှိသူတွေက ငွေအသပြာ ရွေးချယ်
မှောင်ခို ရောင်းချသူတွေ ရဲ့ ဈေးကွက် လက်ဝါးကြီးအုပ်မှု ကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့
၁၅ ရက် အတွင်း
အလိုအလျောက် လိုင်း ပိတ်သိမ်းမယ် ဆိုပြီး စီစဉ်လ်ုက်တယ်
အခု ၁၅၀၀ တန် ဆင်းကဒ် ကို
တစ်သိန်းကျော် နဲ့ ရောင်းနေတဲ့ဆိုင်တွေက လည်း အကြံကောင်းတယ်
ဆင်းကဒ်ထဲ ငါးထောင် ဖိုး ငွေဖြည့်ထားပြီး ရောင်းနေတယ်။
တစ်သိန်း သုံးသောင်း နဲ့ ရောင်းမယ့် ကဒ်ကို
၁၃၅၀၀၀ နဲ့ရောင်းတယ်။ ငွေငါးထောင်ဖိုးဖြည့်ပြီးသား ကဒ် ပေါ့ ။
ဒါဆိုရင် လိုချင်သူတွေလက်ထဲ တကယ်ရောက်သွားမှာပါ။
မလိုတဲ့သူကလဲ အလုအယက် တိုးဝှေ့ပြီးရတော့ ပြန်ရောင်းစား။
အရှင်းဆုံးပြတ်ပြတ်သားသားပြောရရင် ဒီဖုန်းကိုင်ရလို့လဲ ဘာမှထူးပြိး ဘ၀က မြင့်တက်မလာပါဘူး။
မြန်မာပြည်ဆင်းရဲသားအများစု အတွက် ဒီထက်လိုအပ်တာတွေအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်။
အခုတော့ အာချောင်တဲ့ကောင်နဲ့ သံယောင်လိုက်တဲ့ကောင်တွေကြောင့်
ဘာမဟုတ်တဲ့ .. ကိစ္စလေးမှာတောင်…
1500 အရင်းပြုပြီး ဘာမဟုတ်တဲ့ အမြတ်ငွေလေးနဲ့ သိက္ခာတရားတွေ အပွန်းပဲ့ခံလို့ …. ။
ရပ်ကွက်ထဲမှာလည်း ရပ်ကွက်လူကြီး လုပ်သူတွေ ရှက်ကြောပြတ်ပြီး ၊ ခွဲဝေယူတယ် …. ဘယ်တုန်းက နာမည်တွေကောက်ပြီး ဘယ်တုန်းက ဘယ်လို မဲနှိုက်လိုက်တယ် မသိဘူး … ရတဲ့ လူတွေ အချင်းချင်း ပွဲစားကို ဈေးပြိုင်ပေးလို့ မတည့် ထခုတ်တော့မှ …၊ သိတော့တယ် …. ။
ရပ်ကွက်ကတော့ အတူနေကြသူအချင်းချင်း ပုလင်းတူဗူးစို့ စရိုက်ဆန်လို့ မပြောတော့ပါဘူး ။
ဌာနဆိုင်ရာတွေမှာလည်း ဘာထူးလဲနော် ….. ။ လူကြီးအမည်ခံတွေက … ဘာမှ မဟုတ်တာလေးနဲ့ အစွယ် တ၀င်းဝင်းမြင်ရအောင်ပဲ တပ်မက်မှုတွေ များနေလိုက်ကြတာ … ။ ကိုယ့်ရဲ့ ရာထူးနဲ့ သိက္ခာတောင် မထောက်ထားနိုင်ပဲ …. လက်သိပ်ထိုး ဝေပေးတာတွေ … လုပ်နေကြလေရဲ့တော် … ။